Archive du 04-nov-2020
Vahaolana 5 manala panda
Tafiditra ao anatinireo olanny ankamaroanny vehivavy manatona anireny « salon de beauté » sy « estheticienne » ireny ny panda.
misotroa dite tamotamo
Maro dia maro ny fomba azo hampihenana ny vatana. Eo ny fanaovana fanatanjahantena, ny fanaovana régime,
Ianao ve mino fa efa misy olona voatondro ho anny tsirairay?
Miorhasina Lorah : Eny, mino aho fa misy olona voatondro ho an'ny olombelona tsirairay.
Tena tiako ny vadiko ary tsy te hisaraka aminy aho.
5 taona nivadiana izahay, saingy ny 3 taona taminireo dia nampirafy ahy foana izy. Naharary ahy ilay izy saingy nihafiako foana.
Zaza badalela : Mbola kely dia tokony didiana
Raha vao teraka iny ny zaza, dia mila jerena sao misy frein de langue. Hahafantarana azy ilay tahonny lela ambany iny, izay somary miha-matevina.
Tokony hifankahafantatra aman-taonany ve vao mivady?
Fabrice Rasendrasoa: Ny fitiavana dia zavatra Masina, ka rariny sy hitsiny raha mba mifampijery toetra sy miara-miatrika ny zava- misy amin'ny andavan'androm- piainana aloha ny tsirairay.
La jupe, votre alliée de lété
Les jupes midi sont une tendance moderne en soi, mais elles peuvent paraitre, lorsquelles sont mal portées. Soyez conscient de ce fait et ajoutez des touches modernes à votre look pour garder votre jupe midi, toujours fraiche.
Sean Connery James Bond voalohany: nodimandry teo aminny faha-90 taonany
I Sean Connery no mpilalao sarimihetsika nandray voalohany ny anjara toerani James Bond ao anatinio horonantsary nampitondraina ny anaranny mpilalao fototra aminy io ihany. Horonantsary fito no nandraisany io anjara toerani James Bond io ary nanamarika avokoa izany.
Shopping « Eté »
1. Sac fermé en raphia et en cuir  Contact : VaKaNà Design +261 32 43 695 83 2. Sac pour le pique nique ou le marché - Contact : VaKaNà Design +261 32 43 695 83
Smoothie mampihena ny tahanny siramamy
Misahana ny famoahana ny singa antsoina hoe : insuline ny sarakaty. Io singa io dia mampihena ny tahanny siramamy ao anatinny rà, hisorohana ny diabeta.
67 Ha : Mpivady nifanena tany aminny « chambre »
Horakoraka no nataonireo olona nahita ny adinireto mpivady ireto, izay samy nifankatratra niaraka taminny olon-tiany avy, tao amina hotely lehibe misy chambre iray, tetsy 67Ha. Hoy ny fitantaranireo nanatri-maso.
FIAHIANA ARA-PAHASALAMANA Mbola vitsy ny mponina mavitrika aminizy ireny, hoy ny Dr Vero
Ny Dr Vero Olivia Randriamalala no mivahiny eto aminny gazety Jejoo aminity anio ity. Resadresaka momba ny fiahiana ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ho anny mponina no entiny aminao mpamaky.
CROIX ROUGE MALAGASY SY ALLEMANDE Hifanampy aminny fiatrehana ny loza voajanahary
Nanatanteraka atrikasa niaraka taminny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary omaly ny fikambanana Croix Rouge Malagasy sy ny Croix Rouge allemande.
Hetsika Fadim-bolana tsy rà (ha) manahy Hanatsarana ny fiatrehana ny fadim-bolana
Niantomboka ny 1 novambra lasa teo ny hetsika fanentanana voalohany izay karakarainny vondrona Malagasy Women Empowerment ka aharitra 25 andro.
ADY AMINNY FANOLANANA Mitaky fanabeazana sy fanovana toe-tsaina
Mirongatra ny fanolanana zaza amam-behivavy eto amintsika. Saika nihatra tamanaina hatrany izany tato ho ato izay nahitana zazalahy kely vao 14 taona monja naterina teny aminny Centre Vonjy etsy aminny hôpitaly Befelatanana raha toraka izany koa ilay
MIARAMILA 5 TRATRA NANENDAKA TANY ANTSIRABE Esorina aminny toerany
Esorina aminny toerany ireo miaramila 5 lahy tratra nanendaka tany Antsirabe taminny faranny herinandro teo.
Mireille Rakotomalala Notoloran'ny Japoney mari-boninahitra
Anisan'ireo notoloran'ny Goverenamanta Japoney ny mari-boninahitra ordre du Soleil Levant, Etoile d'Or et Argent ramatoa Mireille Mialy RAKOTOMALALA, izay ambasadaoron'i Madagasikara tany Japana sady Ministry ny Kolontsaina sy ny
The Red Carpet : Fifantenana mpilatro sy maodely an-tsary, ho matihanina
Misokatra ho anireo tovovavy sy tovolahy manomboka 15 taona no miakatra ny hetsika fifantenana The Red Carpet Ny 25 novambra ho avy izao, manomboka aminny 1 ora tolakandro ny fifantenana voalohany ary ny sabotsy 28
Tontosa omaly teny amin'ny Carlton Anosy ny fanokafana tamim-pomba ofisialy sy ny fanombohanny tetikasa FANDROSO. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ny tetikasa FANDROSO ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra.
Fitantanana ny asam-panjakana Hapetraka ireo fitaovana, ara-informatika sy ara-kajy mirindra
Mahatratra 11 miliara Ariary aminizao fotoana ny vola very amin'ny fanjakana noho ireo izay lazaina fa mpiasam-panjakana tsy hita soritra na "mpiasam-panjakana matoatoa" raha ny filaza azy mahazatra.
JIRAMA SY NY OURSIN GREEN POWER Hampiasa angovo azo havaozina
Dingana lehibe ao anatinny fanarenana ny orinasa JIRAMA ny firosoana aminny fampiasana ny angovo azo havaozina. Nisy omaly ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo aminny JIRAMA sy ny orinasa Alemana OURSUN GREEN POWER.
Finday 1, zanakazo 1 : Miroso aminny fiarovana ny tontolo iainana ny Telma
Mirotsaka an-tsehatra aminny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ny orinasam-pifandraisana TELMA Madagascar. Nampahafantarinizy ireo ny hetsika finday 1 = zanakazo 1
USAID Nankalaza ny faha-59 taona nijoroany omaly
Nankalaza ny tsingerintaona faha 59 taona nijoroany omaly talata 03 Novambra ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena na USAID.
Vidinentana aminny faranny taona Ezahana tsy hiakatra
Nihena 60% -nireo mpandraharaha tratra nanafina entana, taminny fotoananny fihibohana, teto Madagasikara, araka ny nambaranny ministeranny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana.